Ciidanka Xoogga dalka Soomaliya oo guul ka sheegtay dagaal ka dhacay Sh/dhexe - Jowhar Somali news Leader
Home News Ciidanka Xoogga dalka Soomaliya oo guul ka sheegtay dagaal ka dhacay Sh/dhexe
Ciidanka Xoogga dalka Soomaliya oo guul ka sheegtay dagaal ka dhacay Sh/dhexe
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa guul ka sheegtay dagaal xalay ka dhacay dagaalamayaal Alshabaab ah iyo ciidamo Milatari ah oo ku sugnaa deegaanka Xaaji Cali ee degmada Cadale.
Ciidamada dowlada ayaa sheegay in ay dileen 15 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, halka 26 kalena ay ku dhaawaceen ka dib dagaal ka dhacay degaanka Xaaji Cali ee Gobalka Shabeellada dhexe.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda difaaca Soomaaliya ayaa lagu sheegay in uu iska hor imaadku dhacay markii ay Ciidanka xoogga ka war heleen weerar ay qorsheynayeen in ay Al-Shabaab kusoo qaadaan fariisimo ay Ciidanku lahaayeen, taas oo sababtay in ay cadowgu ka cararaan Tuulooyinka Geel gub iyo Masjid Cali Guud.
“Cadowga waxaa loo dhigay jig gooyo qorsheysan si xirfadi ku dheehan tahay, waxaa la burburiyay raacyadiisa hore, waxaana ku gaaray goobta lagu dagaallamay qasaare aad u badan, taas oo keentay in ay tiro 4 jeer ah weerar soo qaadaan, si ay u qaataan meydad iyo dhaawac farabadan ee goobta ka dhacay, Ciidanka waxuu baacsaday cadowga ayaga oo ku celiyay goobahii ay dagaalka ka soo abaabuleena lana sheegay in ay dib uga gurteen kana carareen tuulada Geel gub iyo Masjid Cali Guud-ba,” ayaa lagu yiri qoraalka Wasaaradda difaaca Soomaaliya.
Wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalkaasi ay Ciidanka Xoogga Dalka kaga shahiideen 1 Sarkaal 1 Sarkaal xigeen iyo 2 Askari, halka dhawacana uu gaarayo 3 Asakari.
Qoraalka ayaa geba-gabadii lagu sheegay in CXDS uu had iyo jeer heegan iyo foojignaan ugu jiro ilaalinta kaaramada Shacabka Soomaliyeed, waxeyna si aan ka leex-leexad laheyn u fulinayaan waajibaadka dagaal ee ay Madaxda Qaranka siisay, si loo difaaco kaaraamada sharafka iyo Madax bannaanida Qaranka.